ओली दुवै पद नछाड्ने, दाहाल-नेपाल अर्को रणनीतिमा, अब के हुन्छ ? « Postpati – News For All
असार २०, काठमाडौं । शीर्ष नेताहरूको कटुतासँगै नेकपाका कार्यकर्तामाझ एउटा चिन्ता गढेको छ– कतै एकता भत्किने त होइन ? नेकपा फेरि फुट्ने त होइन ? मेलमिलापको अपेक्षासहित दुई अध्यक्ष एक–एक विश्वासपात्रसहित शुक्रबार तीन घण्टा बसे। जति बसाइ लम्बिँदै गयो, शुभेच्छुकको आशा बढ्दै गयो। तर, छुटुन्जेलमा मन त माझियो। कुरा बाझिएरै रह्यो।
‘सम्बन्ध नट गुड, नट ब्याड (न राम्रो, न खराब) भयो’, बैठकको उपलब्धिबारे बालुवाटार स्रोतले भन्यो। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षले शनिबार ओलीसँग दाहालले गर्ने छलफल पनि सकारात्मक नदेखिए पुनः सचिवालयका नेताहरूको बैठक बसेर कसरी जाने भन्ने प्रक्रिया टुंगो लगाउने भएका छन्। ‘अब उहाँहरूबीचको शनिबार हुने छलफल हेरौं। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री टसमस नभई आउनुभयो भने हामी स्थायी समिति बैठक अगाडि सचिवालयका साथीहरू बस्छौं। त्यसपछि स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने गरी निर्णय गरेर जान्छौं, त्यही दिशामा हाम्रो छलफल छ,’ ती सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने।
दाहालसँगको छलफलमा ओलीले ४ मंसिर २०७६ मा दुई अध्यक्षबीच भएको अधिकार बाँडफाँटको सहमतिलाई थप व्याख्या स्थायी समितिबाट गरेर जान भने आफू तयार रहेको बताएका थिए। तर दाहालले परिस्थिति त्यसभन्दा धेरै अगाडि गएकोले विगतका सहमति, सम्झौतामा मात्र अब नअड्किने धारणा राखेका थिए। तर त्यसमा ओली सहमत देखिएका छैनन्।
उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाभित्रको विवादमा चासो देखाउँदै नेताहरूलाई सहमतिका लागि आग्रह गरिरहेकी छन्। उनले शुक्रबार बिहान उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेट गरी छलफल गरेकी थिइन्।
त्यस्तै, नेकपाका युवा केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी विवादमा उपयुक्त विकल्पसहित समाधान खोज्न माग गर्दै धर्ना दिएका थिए। नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, ठाकुर गैरे, हिमाल शर्मा, रामकुमारी झाँक्री, दिलुकमारी पन्तलगायत नेताले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुपर्ने, विधि प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्नुपर्ने भन्दै दिउँसो तीन घण्टा धर्ना दिएका थिए।